नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले खुलेर गरे ओली सरकारको प्रशंसा ! के के भने ? ( पढ्नुहोस ) – Pradeshi Online
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी उपचुनावको लफडामा नलाग्ने बताएका छन् ।
काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामा दिएर वामदेव गौतम चुनाव लड्ने तयारी थियो । तर, चतर्फी आलोचना भएपछि गौतम पछि हटेका छन् ।
शुक्रबार आलापोटमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रचण्डले त्यसको पुष्टि गरे । विकास निर्माण छाडेर यो दफडामा नलाग्ने भन्दै उनले भने, ‘हिजो स्वयंम वामदेवले म लड्दिनँ भन्नुभयो, सिद्धियो कुरा ।’
ओली सरकारको प्रशंसा
प्रचण्डले सरकारको खुलेर प्रशंसा गरे । ६ महिनाको अवधिमा नै सरकारले । विकासको आधार खडा गरेको भन्दै उनले अब देखिने गरी काम हुने बताए ।